आज सोमबारे औँसी, औँसी को महत्व / शनि जयन्ती कसका लागि विशेष रहन्छ ? • Nepal's Trusted Digital Newspaperआज सोमबारे औँसी, औँसी को महत्व / शनि जयन्ती कसका लागि विशेष रहन्छ ? • Nepal's Trusted Digital Newspaper
सोमबारे औँसी को संयोग
जुन सोमबारको दिन औँसी पर्दछ त्यही दिनलाई सोमबारे औँसी भन्दछ, हाम्रो क्यालेन्डर अनुसार हरेक सात दिनपछि एउटा सोमबार पर्दछ भने हरेक महिनामा एउटा औँसी। तर सोमवार र औँसी मात्रको संयोग भने कहिलेकाहीँ मात्र हुने गर्दछ। वर्षभरि एक चोटी या दुइ चोटीसम्म सोमबारे औँसी पर्दछ।
सोमबारे औँसी को महत्व
यो पर्व स्नान या भनौँ दान दिनका लागि शुभ मानिन्छ। आजको दिनमा स्नानको लागि मात्र विभिन्न तिर्थस्थलमा टाढा टाढाबाट भक्तजनहरू धाउने गर्दछन्। हिन्दु धर्मावलम्बी अनुसार आजको दिन “सोमबारे औँसी को दिनको तिथि प्राप्त गर्न ठुलो संयोग या भाग्य चाहिने उल्लेख भएको छ। महाभारतका पात्रहरूले पनि आफ्नो जीवनकालमा आजको दिन अर्थात् सोमबारे औँसी को तिथि प्राप्त गर्न नसकेको भनाइ उल्लेख हुने गरेको बताइएको छ।
हिन्दु शास्त्र अनुसार आजको दिन मौन रहेर स्नान र ध्यान गर्नाले पुण्य प्राप्त हुने भनाइ चलि आएको छ। सोमबार चन्द्रमाको दिन हो। चन्द्रमा मनको प्रतीक र सूर्य मस्तिष्कको प्रतीक पनि हो। सोमबारलाई शिवजीको दिन पनि मानिन्छ र आजको दिन भगवान् शिवजी मै समर्पित छ।
ॐ शं शनैश्चराय नमः,
ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः,
ॐ भानुपुत्राय नमः,
ॐ क्रूराय नमः,
ज्येष्ठ कृष्ण औँसीको दिन शनि जयन्तीको रूपमा मनाउने गरिन्छ । यस दिन शनिदेवको पूजा एवं आराधना गर्नाले सम्पूर्ण शनिको ग्रहजन्य दुष्प्रभाव र अशुभ फल नाश भई मन वाञ्छित शुभ फल मिल्ने शास्त्रीय कथन छ ।
शनि जयन्ती कसका लागि विशेष रहन्छ ?
जो जातक शनिको दुष्प्रभावले अनेकौँ समस्या झेलिरहेका छन्, उनीहरूका लागि शनि जयन्ती कल्याणकारी अनि रामवाण सिद्ध हुन सक्छ । जसको जन्म कुण्डली, वर्ष कुण्डली, गोचर दशा, महादशा, अन्तर्दशा, प्रत्यान्तरदशा, सुक्ष्मप्रत्यान्तरदशा, अडैया, साढ़ेसाती आदिमा शनिको कुदृष्टि भई अप्रिय फल एवम् आफ्नो भाग्यमा रोकावटका साथै अनेकन समस्याहरूबाट पीडित हुनेहरूलाई शनि जयन्तीका दिन शनिदेवलाई प्रसन्न पार्न सके मन वाञ्छित फल मिल्ने शास्त्रोक्त कथन छ ।
शनिदेव भगवान् सूर्य र छायाको पुत्र हुन् । शनिलाई सौर्य मण्डलको सबैभन्दा टाढाको ग्रह र बृहस्पतिपछिको सबैभन्दा ठुलो ग्रह मानिन्छ । शनि तुला राशिमा उच्च र मेष राशिमा नीच हुन्छ । कुण्डलीमा तेस्रो, सातौँ र दशौँ स्थानमा शनिको पूर्ण दृष्टि रहन्छ । बुध र शुक्र शनिका मित्र ग्रह हुन् । बृहस्पति सम हो भने सूर्य, चन्द्र र मंगलग्रह शत्रु हुन् । शनि ग्रह वायु तत्त्व र पश्चिम दिशाका स्वामी हुन् ।
शनिको अधिदेवता प्रजापति र प्रत्यधिदेवता यम हो । शनिको वर्ण कृष्ण छ । शनिको सिर मा स्वर्ण–मुकुट र निलो वस्त्र धारण गर्नुभएको उहाँ गिद्धमा सवारी गर्नुहुन्छ ।
फलित ज्योतिषका अनुसार, शनिलाई अशुभ मानिन्छ । शनि नवग्रहमध्ये शनिको स्थान सातौँ हो । शनि एउटा राशिमा तीस महिनासम्म रहन्छ । शनिलाई मकर र कुम्भ राशिको स्वामी मानिन्छ । शनिको महादशा १९ वर्षसम्म रहन्छ । शनिको गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वीभन्दा ९५ गुणा बढी हुन्छ । मानिन्छ कि गुरुत्व बलको कारण हाम्रो राम्रो र नराम्रो विचार चुम्बकीय शक्तिद्वारा शनिसम्म पुग्छ । जसको कृत्य कार्य अनुसार परिणाम पनि चाँडै मिल्छ ।
शनिलाई क्रूर ग्रहको संज्ञा किन दिइन्छ ?
शनिलाई क्रूर ग्रहको संज्ञा दिइन्छ । जुन शनिलाई आफ्नो पत्नीको श्रापका कारण क्रूर बनेका हुन् । आखिरमा शनिको दृष्टि किन यति क्रूर भयो त रु शनिको पत्नीको श्रापको प्रसङ्ग ब्रह्म पुराण’का अनुसार, शनि सानैदेखि विष्णु भगवानका परम भक्त थिए । पछि उनको चित्र रथ नामक गन्धर्वकी छोरीसँग विवाह हुन पुग्यो । शनिकी पत्नी अत्यन्तै धार्मिक एवं पतिव्रता थिइन् ।
कुनै दिन रात्रिकलामा शनि पत्नीले आफ्नो पतिसँग ऋतु दानको इच्छा गरिन् । तर शनिदेव त्यति बेला भगवान् विष्णुको ध्यानमा मग्न थिए । कामातुर पत्नीले धेरै बेर प्रतीक्षा गर्नुपर्‍यो । अनि आवेगमा रहेकी शनिकी श्रीमतीले आफ्ना पतिलाई श्राप दिइन् । पछि पश्चात्ताप पनि भयो । पत्नीको श्रापलाई प्रतिकार गर्ने सामर्थ्य शनिमा थिएन, उनकी पत्नी तपस्वी एवं पतिव्रता थिइन् । त्यसपछि शनिले यथासम्भव कसैलाई पनि दृष्टि नपरोस् भनेर टाउको निहुँर्याएर हिँड्न थालेको कथा वर्णित छ ।
शनिदेवलाई न्याय प्रिय राजा मानिन्छ । स्कन्द पुराणको काशी खण्डमा वर्णित कथाअनुसार, एक दिन सूर्य तथा छाया पुत्र शनिले आफ्नो पिता सूर्यसँग प्रार्थना गरेर भने कि म यस्तो पद प्राप्त गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण चराचर जगत् तथा नवग्रहहरूमध्ये सबैभन्दा शक्तिशाली एवं उच्च पद प्राप्त गर्न सकौँ । जुन पद कसैले पनि प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । ‘हजुरको मण्डल भन्दा मेरो मण्डल सात गुणा ठुलो होस् । देवता, दानव, असुरादि कसैले पनि मेरो वेगको सामना गर्न नसकुन् । मेरो शुभ दृष्टि जसलाई पर्छ, उसको कल्याण होस् र जसलाई क्रूर दृष्टि पर्छ उसको सर्वनाश होस् ।’
शनिले यस्तो भनेपछि छोराको यस्तो उद्देश्य सुनेर सूर्यदेवले काशीमा गएर भगवान् महादेवको भक्ति एवं आराधना गर्न सल्लाह दिनुभयो । आफ्नो पिताको आज्ञा अनुसार शनिले काशीमा गई शिवजीको घोर तपस्या गरी शिवजीलाई प्रसन्न गरी नव ग्रहहरूमध्येको एउटा उच्च पद प्राप्त गर्नुभयो ।
त्यसै समयदेखि शनिलाई भगवान् शिवले नवग्रहको न्यायाधीशको काम सुम्पिनु भएको थियो । त्यसै कारण सम्पूर्ण जगत् शनिदेवसँग भयभीत रहन्छन् । शनिदेवकी आफ्नै पत्नीकै श्रापको कारण जो कोहीमाथि शनिको दृष्टि अडैया, साढ़ेसाती, शनिको कुदृष्टि आदिको कारणले अप्रिय फल दिन बाध्य हुनुहुन्छ ।
शनि ग्रहको कुदृष्टिले एउटा राजालाई रातारात रैती बनाउँछ भने शुभ दृष्टिले एउटा भिखारीलाई रातारात सम्पन्न र समृद्धिशाली बनाउने सामर्थ्य शनिमा हुन्छ । शनिकै दृष्टि दोषका कारण भगवान् शिवजी, गणेश, राम, रावण, तथा पाण्डवहरू आदिले अनेकौँ दुख, कष्ट झेल्नु परेको थियो भन्ने पौराणिक कथा छ ।
शनि जन्म जयन्तीको सन्दर्भ
शनि जन्म जयन्तीको सन्दर्भमा स्कन्द पुराणमा एउटा पौराणिक कथा छ, जसअनुसार शनि, सूर्यदेव र उनकी पत्नी छायाको पुत्र हुनुहुन्छ । सूर्यदेवको विवाह संज्ञासँग भयो । तर केही समयपश्चात् संज्ञाबाट तीन सन्तानको रूपमा मनु, यम र यमुनाको जन्म भयो । केही समय त संज्ञाले सूर्यको साथ जीवन निर्वाह गरिन् । तर केही समयपछि संज्ञाले सूर्यको तेज धेरै समयसम्म सहन गर्न सकिनन् । त्यसै कारण संज्ञाले आफ्नो बहिनी छायालाई पति सूर्यको सेवामा छोडेर त्यहाँबाट हिँडिन् ।
केही समयपछि छायाको गर्भबाट शनि देवको जन्म भयो । एक दिन जब सूर्यले शनिलाई कालो वर्णको देखेर आफ्नो पत्नी छायालाई आरोप लगाए कि ‘शनि मेरो छोरो हैन ।’ जब शनिलाई आफ्नो मातामाथि यस्तो आरोप लागेको थाहा पाए । आफ्ना पिता सूर्यसँग क्रोधित भए । यस कारणले शनि र सूर्यमा वैर भावना रहन विश्वास गरिन्छ ।
शनि जयन्तीमा हनुमानको आराधना
आजको दिन हनुमानजीको आराधनाको पनि महत्त्व छ । रावणको योग बलबाट बन्दी शनिदेवलाई लङ्का दहनको समयमा हनुमानजीले बन्धन मुक्त गरिदिनु भएको थियो । त्यसै बन्धन मुक्त गरेको कारणले शनिदेवले हनुमानजीसँग वर माग्नु भन्दा हनुमानजीले भन्नुभयो, कलियुगमा जो कसैले पनि मेरो आराधना गर्छ भने उसलाई कहिले अशुभ फल नदिनु, कुदृष्टि नराख्नु भन्दा शनिदेवले यस्तै हुनेछ भन्नुभएको थियो । त्यसै समयदेखि जो व्यक्ति हनुमानजीको पूजा गर्छ । शनिदेव वचनबद्ध भएका कारण आफ्नो प्रकोप गरी शुभ–फल प्रदान गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा लोकमा व्याप्त छ ।
आजको यस शनि जयन्तीको दिन आजको दिन फलाम, निलम, तेल, सिसा, तिल, मास एवम् कालो वस्तुहरूको अधिपति शनिदेव रहेकै कारण उपरोक्त वस्तुहरू असहायहरूलाई दान गर्नाले शनिदेव प्रसन्न हुने विश्वास गरिन्छ । यसका साथै यथा शक्ति एवम् भक्तिले शनिदेवको पूजा गरी, तिलको तेलमा बत्ती बाल्ने, निमुखा प्राणीलाई उद्धार गर्ने र आहार दिने साथै अशक्त एवम् असहायलाई भोजन र दान–दक्षिणा गर्नाले शनिजन्य ग्रह–पीडा कम भई शुभ फल मिल्ने कुरा शास्त्रमा वर्णित छ ।